तपाईले प्रयोग गर्ने कण्डम कतै मिति गुज्रिएको त छैन ? यसरी चिन्नुस् गुणस्तरिय कण्डम
Monday, 30 Oct, 2017 5:33 PM
यौनसम्पर्कको बेला कण्डम प्रयोग गर्नाले गर्भाधारण हुनबाट मात्र रोकिँदैन, कैयौँ प्रकारका यौनजन्य रोगहरूबाट बँच्न सकिन्छ । कण्डम सुरक्षित यौनसम्पर्कको लागी अती जरूरी छ । तर एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस्, कण्डम सुरक्षित यौनसम्पर्कको लागी जती अत्षवश्यक छ, त्यसको एक्पायरी समय पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छ ।
सुरक्षित यौनसम्पर्कको लागि के तपाई कण्डमको मिति गुज्रने अर्थात् एक्पायरी मिति हेर्नुहुन्छ ? सामान्यतया मानिस कण्डम किनेर त्यसलाई सिधै गोजीमा राखेर घरमा ल्याउँछन् । तर कोहि त्यसको क्वालिटी अनी एक्सपायरी समयलाई जाँच गर्दैनन् । यदि तपाई गर्भधारण हुनबाट रोक्न अनी यौनजन्य रोगकोे खतराबाट बच्न चाहानुहुन्छ भने कण्डमको प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले यसको म्याद जाँच गर्न नभुल्नुहोस् ।
कसरी बन्छ कण्डम ?
कण्डम बिशेषगरी तीन प्रकारका चिजहरुबाट बन्छ । जस्तै, लेटेक्स, पालीयूरेथ्रेन, अनी लेम्बस्कीन । यदि तपाईलाई लेटेक्स एलर्जी छ भने तपाईको लागी पालीयूरेथ्रेन राम्रो विकल्प हो । यदि तपाई धेरै इन्जोए गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईको लागी लेम्बस्किन कण्डम राम्रो हुन्छ । जे भएपनि सामान्य रुपमा कण्डम तीन प्रकारका हुन्छन् । यीमध्ये तपाईलाई जुन मन पर्छ त्यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । तर एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस्, यो लामो समयसम्म राम्रो हुँदैन ।
कती अवधिसम्म कण्डमले काम गर्छ ?
लेटेक्स कण्डम पाँच बर्षसम्म सुरक्षित रहन्छ । यसको प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले प्याकेटमा यसको एक्पायरी डेट हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई राम्रो ठाँउमा स्टोर गर्नुहोस् । चर्को घाम वा गर्मीमा यसको जीवनकाल छिट्टै खराब हुन्छ ।
यी संकेतहरुबाट जान्नुहोस् कण्डम फाटेको छ
-प्याकेट फाटेको छ भने
-कण्डमको गन्हाउने गन्ध आयो भने
-कण्डमको लचिलोपन भएन भने
यसरी सुरक्षित राख्नुहोस् कण्डमलाई
-तपाई सिधै घाममा कण्डम नराख्नुहोस्
-कण्डमलाई सुख्खा अनी अँध्यारो ठाँउमा नराख्नुहोस्
-कण्डमलाई निश्चित तापक्रममा राख्नुहोस्
कण्डम एक्पायर भएमा के हुन्छ ?
यदि तपाईले मिति गुज्रेको अथवा एक्पायर भएको कण्डमको प्रयोग गर्नुहुन्छ, भने तपाईलाई यौनजन्य रोग लाग्ने खतरा बढी हुन्छ । यसको मतलब एक्पायर कण्डम प्रयोग गर्नुभन्दा राम्रो तपाई कण्डमको प्रयोग नै नगर्नुहोस् । त्यस्तो अवस्थामा तपाई यौनसम्पर्कको मुडमा हुनुहुन्छ तर कण्डम छैन भने तपाई कण्डममा पानी भरेर चेक गर्नुहोस् कतै पानी चुहिएको त छैन ।
कसरी कण्डम एक्सपायर हुन्छ ?
कण्डम एक निश्चित समय पछि खराब हुन्छ । यसकारण सेक्सुअल क्रियाकलापको बेला त्यो फुट्न सक्छ । किनकी लामो समयपछि यसको लुब्रिकेण्ड सुक्छ । अनी शुक्रनाशक प्रभाव अन्त्य हुन्छ । जसको कारण कण्डमको प्रभाव कम हुन्छ ।
एक्सपायर कण्डमले सेक्स गर्यो भने
यदि तपाईलाई सेक्सको बेला या पछाडी थाहा भयो भने ढिलो नगर्नुहोस् । तपाईको मनमा डर छ भने इमरजन्सी कान्ट्रासेप्टिव पिल्स (गर्भनबस्ने औषधी डाक्टरको सल्लाहमा) पनि लिन सक्नुहुन्छ ।